घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू इटालियन फुटबल खेलाडीहरू यसका लागी हामी सबैजनासँग भेट्न सक्छौं
यसका लागी हामी सबैलाई सहयोग पु ¥ याउछौं। 24smi र The Mirror लाई श्रेय
एलबीले उपनाम संग फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ "सुपर मारियो"। हाम्रो मारियो बाल्टोटेली बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यले तपाईंलाई बचाउनु पर्ने घटनाको पूर्ण खाता आफ्नो बचपनको समय सम्म। विश्लेषणमा उनको प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक तथ्य, जीवनशैली र उहाँका बारेमा अन्य साना तथ्यहरू समावेश छन्।
हो, सबैले उनीहरूको अनौठो लक्ष्य उत्सवको बारेमा जान्दछन्। यद्यपि मात्र मारियो बाल्टोलेलीको जीवनीलाई मात्र केही रोचक लाग्छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
उनीहरुसँगको कुराकानी प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्दै, मारियो बाल्टोली बरौ इटालीको पाल्मोमोमा अगस्त 12 को 1990th दिनमा जन्मेको थियो। उहाँ युनिभर्सिटीबाट जन्मेका2बच्चाहरूको 4nd आफ्नो जैविक मातृ, गुलाब र उनको जैविक पिताबीच थियो। थमस बारवाह।
मारियो बाल्टोटेल जीवित आमाबाबु। थोमस र गुलाब। क्रेडिट: सेलकोड
गायनियन जड़ों संग काले आदिवासीता को इटालियन राष्ट्रीय जन्म को पछि जीवन को खतरे को आंतन जटिलता संग निदान गरिएको थियो, एक शर्त हो कि उनको गरीब आमा पिता को उपचार नहीं गरेर सकेन र उनको3वर्ष को आयु को लागी गोद लेने को लागी प्रस्ताव को प्रस्ताव को बजाय छोड दिए।
जब उनी 3, क्रेडिट: फुटबलल्डेलक्सक्स उमेरको उमेरमा मारियो बाल्टोलीले आफ्ना पाद्रा आमाबाबुलाई स्वीकार गरे।
नतिजाको रूपमा, युवा बाल्टोलीले आमाबाबुलाई सिल्भिया र फ्रान्सेस्कोको बालोटेलोलाई कहिलेकाहीँ उनीहरूको उमेरले3उमेरमै उठाइयो। बाल्लोलेलीको साथमा दुईजना छोराहरू र उनीहरूको आफ्नै छोरी थिए, युवा बाल्टोलीले सप्ताहांतको समयमा नियमित रूपमा आफ्नो जैविक आमाबाबुलाई भेट्न अनुमति दिए।
जवान बाल्टोलीले आमा र बहिनीहरूको भ्रमणमा। क्रेडिट: जीएसआर।
बालोटेलले केही वर्षसम्म उनको जैविक आमाबाबुको असक्षमताको कारणले स्वास्थ्य र सामाजिक आवश्यकताहरु पूरा गर्न को लागी केही वर्षसम्म उनको जैविक भाइबहिनी अबिगेल, ननोक र एंजोक बारवायसँग सम्बन्धित सम्बन्धमा प्रयोग गरेका थिए।
उनीहरुसँगको कुराकानी क्यारियर बिल्डअप र प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
बाल्टोलीले फुटबल खेल्ने खेलको रूपमा फुटबललाई रोजे र उनको प्रारम्भिक जीवनको जटिल जटिलताहरूको बावजूद खेलमा सक्रिय रूपमा संलग्न थिए। त्यतिबेला फुटबल अगुवाले 11 उमेरको उमेरमा उनी एसी लुमेजेनको युवा प्रणालीमा प्रवेश गरे जहाँ खेलमा प्रतिस्पर्धात्मक क्यारियर बिल्डअपको उत्पत्ति सुरु भयो।
मारियो बाल्टोलीले एसी लुमेजेनलाई जबर्जस्ती गरे जब उनी 11 उमेरका थिए। क्रेडिट: दैनिक मेल।
यो एसी लुमेजेन मा थियो कि बालोटोले रैंक्स मा गुजारा र क्लब को वरिष्ठ टीम को पदोन्नति गरे जब त्यो केवल 15 थियो। पछिल्लो प्रारम्भिक क्यारियर प्रयासले देख्यो कि बाल्टोलीले बार्सिलोनालाई बार्सिलोनामा 2006 मा ल्यान्डमा अन्तर मिलानको हस्ताक्षर गरे पहिले बार्सिलोनामा असफल प्रयास गर्यो।
एक्सएनएक्सएक्स-वर्ष-उमेर बालोटेलले अन्तर मिलानलाई सामेल गर्न अघि बार्सिलोनामा असफल प्रयास गर्यो। क्रेडिट: जेबेगा।
उनीहरुसँगको कुराकानी सडकमा फेम स्टोरी
बैल्टोलीले अन्तर मिलानमा रोचक क्षण राखेका थिए जसले 2008 मा Supercoppa Italiana लाई विजय प्राप्त गरे र 2007-2008 सेरी ए। साथै, 18 वर्षको उमेरमा सबै भन्दा सानो खेलाडीले च्याम्पियन्स लीग खेलमा स्कोर गर्नका लागि सबैभन्दा सानो खेलाडी बनेको थियो। समय।
मारियो बाल्टोलीले अन्तर मिलनमा उत्कृष्ट सुरुवात गरे। क्रेडिट: किंग्सपोर्ट।
तथापि, उनले उनीहरूको विरुद्ध नस्लवादी च्याटहरूमाथि साथै अनुशासित खेलाडी हुन असक्षम हुने अपरिहार्य चुनौतिहरू सामना गर्थे। बाल्टोलीले चाँडै प्रसोधन सत्र सुरु गरे र इटालियन टिभि शोमा देखाएर अन्तर मिलानका प्रशंसकहरूलाई इन्कार गर्यो, क्लबको प्रतिद्वंद्वियों, एसी मेलनको टी-शर्ट पहिरन लगाए।
उनीहरुसँगको कुराकानी फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
ढिलो 2010 त्यो अवधि थियो जसको कारण बल्लोटेलको जीवनमा नयाँ अध्याय खोलियो किनभने खेलाडीले म्यानचेस्टर सिटीमा हस्ताक्षर गर्यो। उनले एक्सन्युक्सएक्स-एक्सएनएक्सक्समा अङ्ग्सेनलको विरुद्धमा इंग्ल्यान्डका लागि आफ्नो पहिलो गोल गरे।
निर्धारित स्थान अग्रिम पछि आफैंको खेलमा प्रशंसक-मनपर्ने रूपमा स्थापित गर्न र वर्षको अन्त्य सम्म, उनको उल्लेखनीय प्रदर्शनको लागी गोल्डन ब्वाइज अवार्ड जित्यो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
मारिन बाल्टोले सफलता र मन्चेस्टर सिटीमा एन्टिटिक्सलाई विश्वभर फुटबलका फ्यानहरूमा लोकप्रिय बनाउनुभयो। क्रेडिट: लक्ष्य।
उनीहरुसँगको कुराकानी सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
मारियो बाल्टोटेली लिखित रूपमा हालै विवाह भएको छ। हामी तपाईंलाई आफ्नो डेटिङ ईतिहास र वर्तमान सम्बन्ध जीवनको बारेमा जानकारी ल्याउछौं। फुटबल स्टारको सुरुवातले मोडेलबाट अभिनेत्रीहरूलाई र सजिलो गुणका साथ महिलासँग धेरै सम्बन्ध राखेको छ।
सबै महिलाहरु को कुनै पनि बाहिर खडा छ जस्तै उनको गर्लफ्रेंड बच्चा मामा, रफ्लेला फोको भयो। 2010-2013 बीचको अवधिमा र यो अवधिमा एक छोरी सँगै पिया (5th डिसेम्बर 2012 मा जन्मिएको) सँगै थियो।
मारियो बाल्टोलीले पूर्व-प्रेमिका रफ्फाला फिको र छोरी पियाको साथ। क्रेडिट: दैनिक मेल।
तथापि, यो दुई वर्ष अघि एक डीएनए परीक्षणको सकारात्मक नतीजा बरु बलियोले आफ्नो छोरीको पितृ स्वीकार गरे। निकटतम केन्द्र जोन लाईन को सशक्तता संग मिल्यो थियो 2013 मा उनको पूर्व बेल्जियम प्रेमिका, फनी निगेश को उनको सगाई थियो। तिनीहरू 2014 मा अलग तरिकाहरू गए।
मारियो बाल्टोलीले पूर्व-प्रेमिका फनी नगुसाहासँग। क्रेडिट: CelebMafia।
बाल्लियोली उनको स्विस फ्राइमिली क्लियोलिया संग सम्बन्ध राख्नुको समय हो जुन उनको पहिलो पुत्र शेर (जन्म सेप्टेम्बर 2017 जन्मिएको) थियो।
मारियो Balotelli संग केटी प्रेमी क्लियोलिया र छोरा शेर। क्रेडिट: आरटीआई।
उनीहरुसँगको कुराकानी पारिवारिक जीवन तथ्य
बाल्टोलीले गरीब जैविक पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट मेल खान्छ। हामी तपाईंलाई आफ्नो जैविक आमाबाबुको बारेमा वास्तविक विवरण ल्याउँछौं, आमाबाबु र बहिष्कारको उत्साह।
मारियो बाल्टोटेल जैवोलिक बुबाको बारेमा: थोमस बारवाह बाल्लटेलको जैविक पिता हो। उहाँ एक घानावासी आप्रवासी हुनुहुन्छ जो केही वर्ष अघि इटालीमा बस्नुभयो बरु बालबोटेली जन्मेको थियो। थॉमसलाई बोल्नको लागि उहाँलाई गोर्खालीको चिकित्सा बिलका लागि रकम बढाउन संघर्षको लागि श्रेय गरिन्छ। यद्यपि बाल्टोलीले आफ्नो आमाबाबुलाई तिनलाई त्यागेका छन्, यसैले उहाँले आफ्नो जैविक परिवारसँग सम्बन्ध बिर्सनुभयो।
मारियो बाल्टोटेल जैविक मातृको बारेमा: गुलाब बरुवा बाल्टोटेलको जैविक मम हो। उनले बाल्टोली जन्मको समयमा एक गृह रक्षक थिए र सफा वर्ष पछि काम गर्न गए। गुलाब बाल्टोटेलसँग सम्बन्धको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गरिएको छ जसलाई उनी विश्वास गर्छन् कि उनीहरूको पालोपातीका आमाबाबुले आफ्ना पाहुना आमाबाबुले भने।
मारियो बाल्टोलीको आमाबाबु थॉमस र गुलाब। क्रेडिट: कोरिरी।
मारियो Balotelli फोस्टर बुबाको बारेमा: फ्रान्सेस्को बालोथोली फुटबल प्रतिभा को पादरी पिता थिए। तिनी एक धनी र प्रभावशाली इटाली थिए जसले आफ्नो धन र जडान प्रयोग गरे। फ्रान्सेस्कोको लामो समयसम्म बस्थेपछि बेलोलीले लामो समयसम्म बीमारीको कारण जुलाई एक्सएनएमएक्सक्समा फ्याँक्नुअघि फुटबलमा उत्कृष्ट उँचाइहरू पाउँथे।
को बारे मा मारियो Balotelli फोस्टर आमा: सिल्भिया बाल्टोली फुटबलको पालो आमा हुनुहुन्छ। उनी यहूदी पुर्खा र बाल्टोटेलको हृदयको नजिकको मान्छे मध्ये एक हो। त्यसो भए उनीहरूको बन्धन र एक-अर्काको बुझाइ हो कि बाल्टोलीले उनी यूरो एक्सएनएमक्सक्सको सेमिफाइनलको दौडान फ्रान्सको लागि दुई वटा उत्कृष्ट गोल गरे।
मारोस् आमाबाबुको साथ मारियो बाल्टोलेली। क्रेडिट: Gazzetta।
मारियो बाल्टेली सिबिलिंग को बारे मा: बाल्टोलीले तीन बहिनीहरू छन् जसमा उनी ब्राजिया, इटालीमा भ्रमण गरेका थिए। उनीहरू आफ्ना ठूला बहिनी अबीगेल, तिनका भाइ भाइनोक र बच्चा बहिनी एन्जिलमा समावेश गर्छन्।
अबीगेल बारवा बच्चाहरु लाई फुटबलर संग विवाहित लेखन को समय ओबाफेम मार्टिन्स एननोक बरवा एक फुटबल खेलाडी हो जो इटालियन साइन्स को लागी खेल्छ, एफसी पाविया। बीचमा, त्यहाँ बोल्टोलीको बच्चा बहिनीको बारेमा धेरै थाहा छैन एन्जिल बरुआ, न त Balotelli को आफ्नो पादपाजु संग बहिनी को पहिचान छ।
मारियो बाल्टोटेल जैविक परिवारको चित्र उनको भाइबहिनीहरू देखाउँछन्। क्रेडिट: घाना Celebrities।
मारियो बाल्टोलेली सम्बन्धी सम्बन्धको बारेमा: त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार नगरेको बताउँदै बाल्टोलीले अचम्म, चावल, चचेरी, भित्ता र भित्ताको तथ्यलाई ध्यान दिएनन् कि उनीहरूले उनीहरूको पहिचान गर्दैनन्। त्यस्तै, त्यहाँ आफ्ना हजुरबुबाहरूका बारेमा धेरै थाहा छैन।
उनीहरुसँगको कुराकानी व्यक्तिगत जीवन तथ्य
के यसले मारियो बाल्टोलेलीलाई टिकाउँछ? पछि हामी तपाईंलाई आफ्नो व्यक्तित्वको सिर्जना ल्याउनको लागि तपाईंलाई एक पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गरौं। सुरू गर्न, मारियो बाल्टोलेली पर्सनल म्यासेज लक्षणहरूको मिश्रण हो। उहाँ एक आकर्षक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले ऊर्जावान र आशावादी हो।
अनुकूलता बालोटोली को इनाम व्यक्तित्व विशेषता हो। क्रेडिट: दैनिक एक्सप्रेस।
मानवको रूपमा बालोटोलीका गुणहरू सार्वजनिक धारणाभन्दा धेरै फरक छन् र उनीहरूले कम-चाबी व्यवहार गर्ने आश्चर्यचकित हो, तथ्य भनेको कि उहाँ उहाँका नजिक हुनुहुन्छ। उहाँको शौकहरू भिडियो गेमहरू प्ले गर्दै, संगीत सुन्न, राम्रो चलचित्रहरू हेर्छन् र साथीहरू भेट्टाउँछन्।
उनीहरुसँगको कुराकानी जीवन शैली तथ्य
मारियो बाल्टोलेको निवल मूल्य अझै पनि समीक्षा अन्तर्गत छ। यद्यपि, लिङ्गको समयमा £ 18.00m को बजार मूल्य छ। "सुपर मारियो" एक जंगली स्पेंडर हो जसले आफ्नो पुनरुत्थान दुर्व्यवहारको लागि जुर्नु नराम्रो मन नपर्ने र फरिरी, बेन्टले, अडी र मास्सार सहित स्पोर्टी र उत्कृष्ट कारहरूसँग बिजुलीमा देखाएको छ।
मारियो बाल्टोलीले आफ्नो कार संग्रहमा एक फेरारी छ। क्रेडिट: शुद्ध लक्जरी।
उहाँ विभिन्न क्यारियरमा खेल्दै लाखौं डलरको भाडामा भाडामा राख्नुहुन्छ। Balotelli यो तथ्याङ्क, जीवन को एक पूर्ण को क्षमता को लागि लायक लायक छ। यसैले उसले पार्टीमा भाग लिन्छन्, मित्रहरूसँग पिउने, धूम्रपान र आनन्दित हुने मौकालाई कहिल्यै नछोड्न पनि छोडे तापनि पनि यो जुर्नु पर्छ।
उनीहरुसँगको कुराकानी अनियमित तथ्यहरू
बाल्टोलीले एक पटक कैसीनोमा $ 1,000 जितेर घर बेच्न $ 25,000 को उपहार दिएर दानको दुर्लभ कार्य प्रदर्शन गरे।
आफ्नो धर्मको सन्दर्भमा, मारियो बाल्टोली ईसाई आमाबाबुलाई जन्मियो र यहूदी पाहुना आमाबाबुले जन्मियो। उनीहरूले ईसाई धर्मका लागि कृतज्ञता देखाउँछन् विशेष गरी कोथोलोस्लिज्म। यसको अतिरिक्त, तिनी एक पटक कैथोलिक चर्च पोप फ्रान्सिसको टाउकोमा भेटिए।
पोप फ्रान्सिसको साथ मारियो Balotelli बैठक। क्रेडिट: दैनिक मेल।
अक्टोबर अक्टोबर 2011 बालोटोले अचानक उनको खिडकीबाट आतिशबालिकालाई गोली मारेर आफ्नो बाथरूम जलायो। उक्त घटना पछि, बाल्टोलीले रोचक रूपमा आगामी कार्यकर्ता सुरक्षा प्रवक्ता बनेका थिए।
उनको अधिकांश ट्याटो लेखन लेखन को रूप मा फैलिएको छ। सबैभन्दा महान् र हालको एक गेंगिस खान उनको छातीमा टाटिएको छ। यो पढ्छ: 'म परमेश्वरको सजाय हुँ। यदि तपाईंले ठूलो पाप गर्नुभएन भने, परमेश्वरले तपाईंमाथि मलाई जस्तै सजाय पठाउनुभएन। '
मारियो बाल्टोलीको प्रमुख टैटूले एउटा गेंगिस खान उद्धरण गर्दछ। क्रेडिट: दैनिक मेल।
कुल मिलाएर, मारियो बाल्टोटेली एक रोचक कार्य हो र खेलको पिच बन्द। हामी तपाईंलाई एक आकर्षक भिडियो ल्याउँछौं जसले केहि फुटबल एन्टिटिक्सलाई उत्कृष्ट फुटबल प्रतिभा द्वारा खिचेको छ। क्रेडिट WeTalkFootball.
अन्तमा, हामी तपाईंलाई संक्षिप्त विवरण यूट्यूब भिडीयो प्रस्तुत गर्दछौं जुन तपाईंले अहिलेसम्म पढ्नुभएको छ।
उनीहरुका अनुसार, भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मारियो बाल्टोले बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाइबिलको तथ्य पढ्ने धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।